Oge bụ ihe ịma aka maka ndị ọkachamara n'ịzụ ahịa | Martech Zone
Monday, September 12, 2011 Wednesday, October 26, 2011 Douglas Karr
Nke mbu Zoomerang nsonaazụ nghota dị! Oge bụ ihe ịma aka kasịnụ maka ndị ahịa ahịa. Na-eto eto ina na marketers na-emepụta ọdịnaya maka esịtidem ojiji, weebụ, blog, na-elekọta mmadụ media na ndị ọzọ… ọ bụghị ihe ijuanya na oge bụ nnukwu nsogbu anyị. O nwekwara ike ịbụ ihe mgbaàmà nke akụ na ụba na-adịghị ike ebe ụlọ ọrụ anaghị ego ihe ndị dị mkpa iji mezue ọrụ dị mkpa iji sọọ mpi.
Nke a bụ nsonaazụ (mbupụ eserese bụ atụmatụ na ngwa onye nkwado anyị - Zoomerang!)
Nke ahụ kwuru, na stats na-enye mpempe ozi ọzọ… enwere ọtụtụ ohere maka ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa ịzụlite oge ịchekwa ngwaọrụ nke na-agbanwe usoro anyị. Izu abụọ gara aga ejiri m oge dịkarịsịrị njọ wepụta data sitere na nchịkọta na ịzụlite akụkọ ọdịnala na dashboard maka onye ahịa iji nye ụfọdụ ntinye na ọrụ njikarịcha njin ọchụchọ anyị rụzuru. Iri puku kwuru nde Keywords chọrọ ịhazi, kekọta ya na nzacha iji hụ ma mbọ anyị na-akwụ… ọ bụghị obere ọrụ maka mmadụ, mana ọ ga-ekwe omume maka ụlọ ọrụ mmepe.
Ọ na-emekwa ka m chee ma ndị na-ere ahịa na-ewepụta oge iji mejuputa akpaaka akpaaka ma ọ bụ na ha na-aga ụzọ ntuziaka. Enweghị m ike iguzo na-eme otu usoro ahụ ugboro abụọ n’usoro ka m na-achọkarị ụzọ dị mfe. Ikekwe nke ahụ bụ isiokwu dị mma maka nhoputa na-abịanụ!
Nchoputa nke izu a di omimi. Anyị chọrọ ịmata ụdị usoro mgbasa ozi mmekọrịta ị na-etinye maka ụlọ ọrụ gị: